Barwaaqo's Content - Page 4 - Somali Forum - Somalia Online
Xaa ku beenna! Hadii Farmaajo diiday waddahadal muxuu Muuse ka doonay Adis? Sow warku intaa kuma ekaadeen? Muusoow iska joog waddahadal ma jiree ayey arintu ku koobnaan lahayd. Muuse Biixi casuumad rasmiya ayuu helay oo looga wada hadlayo xidhiidhka ka dhexeeya Somaliland iyo Ethiopia. Beentu lug kaliya ayey leedahay ; lugtaa marka la qabto way dhacdaa oo rafataa. Waddahadal maba uu qorshaysnayn balse waxa warkan beenta ah soo abaabulay Nabar iyo Naxdin oo rabay inay ku shaasheeyaan Mujaahid Madaxwayne Muuse Safarkiisa.
^^^^^^^ War jiraabba Cakaaruu iman.
Nabar iyo Naxdin war been ah ayey la wareegayaan! Madaxwayne Biixi Waxa uu Casuumad rasmi ah ka helay Raysalwasaaraha Ethiopia.
Barwaaqo replied to Peace Action's topic in Politics
Dee Talaaboow sowdigan ku digtey walaalaheenna Koonfuria. Reer baa curradkoodii dhintay dabadeed islaantii dariskaa tidhi “curradabba loo soo gelyoo, kaygiinna kab baa ka luntay” kolayba nin baa warkaa ku masabiday qof dumara- anigu Waxaan qabaa nin baa hadalkaa yidhi (wixii xunba Xaawaa leh)
A taste of old school Somali - Samatar and 18 year old Kaltuun Bacado
Barwaaqo replied to Holac's topic in General
Sudaankayagu dookh fiicanaa
Following South Sudan, he travelled to Somaliland to meet with President Bihi. The first British Cabinet Minister to visit Somaliland, Mr Williamson discussed the shared priorities of security and economic development as well as counter terrorism and the role UK military plays in mentoring the Somaliland coastguard. Defence Secretary commends UK peacekeepers in South Sudan - GOV.UK WWW.GOV.UK Gavin Williamson visits 300 UK troops in Malakal and Bentiu
^^ The original tweet prevails.
Cajiib, bal isaagaa dulman oo loo doodayaaye maxaa qardajeexa iyo meel kale ka hadalkeedda uga gidhiisha!
Hambalyo Ilhaan, dhaqankeedda ayey aduunka bartay.
Badhaadhaheenna iyo barwaaqadeenna hawl baa loo boqoolayaa. Ishii buktaay ku bikaacso. Ma aragtay iyagoo markay daawadeen warkan qoladii Butiland soo ururisay barakacayaashii Bari joogey Ditoore?
US GOVT says Somalia unsafe for US citizens
Talladanni @Tallaaboqoraalkiisii u eka? Waaba kafantiinna sii Tosha!
Barwaaqo replied to Suldaanka's topic in General
Woow, maxaa amaan quruxeed inanta loo heesayo la huwiyey! “ Habluhuba markaad soo gashay illa hagaasaane” Masraxan oo kale wuxuu ku tusayaa in dhalintayadu nabad iyo cisi ku nool yihiin. Jacayl waxa laga xasuustaa meel nabdoon.
Heritage Institute Djibouti Conference - Heated exchanges
Afkaaga caano lagu qabay ; Sucaad cashar lama ilaawaan ah bay u dhigtay Koonfuriyadii.